Magaca domain Web kacaankii ka dhacay yaabaa difaaca summad - Rule News
Magaca domain Web kacaankii ka dhacay yaabaa difaaca summad
Domain Name Extensions (credit Photo: Booklight The)
Ballaarinta mass of magacyada domain Internet keeni karaa xaalad jahawareer difaaca ee alaabooyinka ee cyberspace, ka ee A hantida aqooneed jirka digay on Monday.
“Waxaan leenahay ballaarinta aan caadi ahayn waxan la socday,” Saciid Francis Gurry, oo madax ka ah Ururka Aduunka Property Garasho (WIPO), oo maamusha xeerarka caalamiga ah ka gees ah cybersquatting.
“Taasi waxaa laga sugayaa inay saameyn ah, taas oo ay u badan tahay in ay muhiim ah, on ilaalinta summad. dabeecadda dhabta ah ee saameynta, ma aan hubin ee marxaladdaan, laakiin waxay u badan tahay in ay muhiim ah oo carqalad,” Gurry u sheegay suxufiyiinta.
“Milkiilayaasha Astaanta ay yihiin kuwo aad uga walaacsan tahay saameynta in ballaarinta arrintani ku yeelanayso nidaamka brandingeksperten,” ayuu hadalkiisa ku daray.
Furitaanka internetka in magacyada domain in meel fog laga gudbo Classics sida .com, .gidi, .net, .Gov, iyo .edu ayaa bogaga by-US salaysan Web overlords Corporation Internet-ka ee Magacyada Hawsha iyo Lambaro (ICANN) sida isbedelka ugu weyn ee Web ah tan iyo markii ay la abuuray.
Waxaa ay muddo dheer kaliya 22 domains heer sare-generic (gTLDs), kuwaas oo .com iyo .net ka kooban qayb libaax ee.
Laakiin ku salaysan California ICANN ayaa sheegay in snowballing ee Internetka — iyadoo qaar ka mid ah laba bilyan oo isticmaale adduunka oo dhan, oo badhkood wuxuu Aasiya — ka dhigaysa magacyada cusub lagama maarmaan ah.
Qiyaastii 1,400 gTLDs cusub waxaa si tartiib tartiib ah loo gelin ilaa banaan, kii hore 160 hore u wakiishay in shirkadaha diiwaan Web kala duwan.
“fursad ee takrifalka alaabooyinka aheyn ballaarinaya,” ayaa sheegay in Gurry, annaga oo ogaaney in diiwaan magaca domain ah waa raqiis ah, hab automatic in ay qaadataa xoogaa ilbiriqsiyo ah oo uusan haysan filter a in la baaro haddii uu jiro khilaaf summad ka.
“Taasi waxa ay carqalad ku haysteen of culays weyn ee ilaalada on qayb ka mid ah milkiilayaasha summad,” ayuu yiri.
In isku darka hore, furay January, waa cinwaanada dhamaadeen Galliani, baaskiil, kali, iyo sidoo kale dharka, haynta, tuubooyinka iyo isku biimeynta ah.
shuruudaha kale generic soo bidhaamayaan ka mid ah .football, .duulimaad, .Kaararka iyo .bid.
The domains warqad ugu horeysay abid non-Latin ayaa sidoo kale lagu ansixiyey, ay ka mid yihiin Shiinaha ee “ciyaarta”, Carabi ah ee “web” ama “network,” ama Cyrillic ee “online”.
– Concern in ka badan kooxda saamayn’ –
Gurry qiray in ballaarinta waxaa loogu tala galay in uu yareeyo isticmaalka Internet-ka dhakhso u kordhaya.
“Sidaas ayaanu ku, sababaha ay u balaadhinta la xidhiidha horumarinta awoodda sahanka Internetka. Waxa aynu nahay walaacsan yahay saameynta dhinaca of saamaynta in in uu leeyahay on nidaamyada brandingeksperten loo isticmaalo by macaamiisha ay la dhexgalo ganacsiga,” ayuu hadalkiisa ku daray.
Milkiilayaasha Astaanta safartay by cybersquatting — diiwaangelinta xadgudub magacyadoodu domain, mararka qaarkood si ay u dib ugu iyaga ka iibiso kooxda heysata xuquuqda ama barbaro macaamiisha inay kula dagaalanto waxyaabaha — waxay leeyihiin fursad u jeestay hab-qaadidda WIPO ee.
In 2013, 2,585 Xaaladaha noocaas ah waxaa lagu xareeyo WIPO, ku saabsan rikoor 6,191 magacyada domain shakhsi.
Under xeerarka caalamiga ah, shirkadaha diiwaan Web waa tirtiri diiwaangelinta Khasaaray xaaladaha cybersquatting WIPO.
The jirka UN waxaa horay maqalka ay kiiska ugu horeysay ku saabsan gTLD cusub, xareeyay ee February iyo is bar bar shirkad Jarmal ka dhanka ah registree Dutch website-ka weli-firfircoonayn canyon.bike.
Erik Wilbers, Agaasimaha ama WIPO ee heshiisiin gacanta, ayaa sheegay in kororka ugu badan ee gTLDs macnaheedu yahay in kooxda heysata summad leeyihiin lahaa in uu noqdo “ka badan diirada” waxa ay ka doodid.
“Aadan ku heyn karin rasaas at wax kasta oo dhaqdhaqaaqa ee ah dhismaha nidaamka magac domain,” ayuu yiri.
20475	0 Cybersquatting, Domain name, Francis Gurry, Jeneerigga ah domain heer sare-, ICANN, Lebis Domain Name-Khilaafaadka-Qaraarka Siyaasadda, WIPO, Ururka hantida aqooneed ee World
← qalab New khiyaamada dagaal Crimea leeyahay xornimada ka Ukraine →